Xidigii Ugu Fiicnaa Ee Uu Ka Hor Yimid, Saddexda Difaac Midig Ee Aduunka Ugu Fiican, Ciyaartoygii Ugu Fiicnaa Ee Uu La Soo Ciyaaray Iyo Cafu Oo Xusuusta Aduunka Isku Soo Celiyay. - GOOL24.NET
Xidigii Ugu Fiicnaa Ee Uu Ka Hor Yimid, Saddexda Difaac Midig Ee Aduunka Ugu Fiican, Ciyaartoygii Ugu Fiicnaa Ee Uu La Soo Ciyaaray Iyo Cafu Oo Xusuusta Aduunka Isku Soo Celiyay.
Cafu ayaa ka mid ahaa ciyaartoydii wacdaraha ka soo dhigay taariikhda kubabda cagta aduunka iyo waliba xulkiisa Brazil wuxuuna Cafu aduunka isku xusuusiyay waraysi aad u xiiso badan oo uu bixiyay kaas oo uu kaga jawaabay su’aalo badan oo xaasaasi ah isla markaana go’aan adag u baahan.
Cafu ayaa soo doortay saddexda difaac midig ee uu arko in ay aduunka ugu fiican yihiin maadaama oo isaga lagu tilmaamo mid ka mid ah difaacyadii midig ee taariikhda kubbada cagta ugu fiicnaa. Cafu ayaa soo qaatay waayo ciyaareed oo 19 sanadood oo guulaystay.
Cafu ayaa waqti fiican u soo qaatay kooxaha Roma iyo Real Zaragoza laakiin waqtigiisii ugu fiicnaa waxa uu ahaa markii uu ka ciyaarayay kooxda AC Milan ee uu ahaa difaaca midig ee aduunka ugu fiican isla markaana uu xulkiisa Brazil guulaha taariikhiga ah kala qayb galayay.
Cafu ayaa ku soo guulaystay koobka aduunka, Champions League iyo waliba horyaalka Talyaaniga isaga oo ciyaaraha ka fadhisitay sanakdii 2008 kii kadib markii uu saftay 525 kulan halka uu xulkiisa matalay 142 kulan oo heer caalami ah.
Intii uu Cafu ka maqnaa ciyaaraha waxaa booskii uu taariikhda ka soo sameeyay ee difaaca midig ka soo ciyaarayay xidigo tiro badan waxaana la waydiyay difaacyada midig ee waqti xaadirkan aduunka ugu fiican wuxuuna liiska ka saaray Kyel Walker oo loo arko in uu liiskan ku jiri lahaa.
Taas badalkeeda Cafu ayaa aaminsan in Dani Alves, Dani Carvajal iyo Danilo ay yihiin saddexda difaac midig ee hadda aduunka ugu fiican wuxuuna yidhi: “Waqti xaadirkan, fikradayda waxaa ciyaartoyda difaaca midig ee ugu fiican ah Dani Alves, Dani Carvajal iyo Danilo”.
Cafuayaa hadalkiisa sii raaciyay: “Iyaga dhexdooda, Daniel Alves ayaa ugu dhawaan ah ka hanaanka ciyaareed inta ugu badan aniga igala midka ah”.
Cafu ayaa xaaladu lagu sii adkeeyay waxaana la waydiiyay in uu soo doorto xidig kaliya oo ah kii ugu fiicnaa ee uu la soo ciyaaray wuxuna ku jawaabay: “Waxaa jira qaar badan, laakiin haddii ay waajib igu tahay in aan mid soo qaato waxa uu noqonayaa Ronaldinho Gaucho.”
Waxa kale oo Cafu la waydiiyay in uu magacaabo ciyaartoygii ugu adkaa ee uu waayihiisa ciyaareed ku soo wajahay wuxuuna ku jawaabay: “Zinedine Zidane. Xaqiiqdii waxa uu ahaa fantastik”.